Cabsida, daacadnimada, kalsoonidii kalsoonida, deeqsi, is-xakamayn, cibaadaysi, iyo sadaqo, daraasad, gaabis, iyo rogrogasho; dhib la'aan, xaqiiqda, iyo xorriyadda ka timaadda xanaaq, istiqaalad, isdhaafsi, oo aan ka hadlin ciladaha kuwa kale, naxariis guud, xishmeyn, iyo khafiifnimo; sabirnimada, awoodda, dabeecadda, daahfurnaanta, qaddarinta, sharafka, qaddarinta, iyo xorriyadda xagga maskaxda-kuwani waa calaamadihii uu wanaaggu ka mid yahay dabeecada ilaaha, O ina Bharata.
Vol. 1 DECEMBER, 1904. No. 3
Xuquuqda, 1904, by HW PERCIVAL.
Maalintii labaatanaad ee bisha Diseembar, qorraxda, oo maalmahoodu aad u gaaban tahay tan iyo maalintii koowaad ee bisha Juun, waxay bilaabmaysaa jiilaalka qaboobaha, calaamada calaamadda, calaamadda tobnaad ee jilaalka. Saddexda maalmood ee soo socda ayaa waxaa loo geeyay waayadii hore ee diinta. Habeenkii badhkii afar iyo labaatanaad, oo ah bilowgii shan iyo afartanaad, sida kaniisada oo loo yaqaano ciriiriga Virgin ama Virgo, calaamadda lixaad ee jilaalka, ayaa ka kacday xagga sare, waxay ku dhawaaqeen heeso ammaan ah, wuxuu ku dhawaaqay in Ilaaha Eebbe ku dhashay; in uu noqon lahaa Badbaadiyaha dunida ee ka soo iftiin gudcur, murugo iyo dhimasho. Kun-iyo-shanaadkii Diseembar, Roomaanku waxay qabteen farxad farxadeed - xaflad qorraxda-qurxoon ee dhalashada Maalinta Qorraxda, iyo cayaaraha wareegga wareegga ayaa bilaabay farxad weyn.
Ilmahayga Maalinta, Badbaadiyaha dunida, wuxuu ahaa gabadhii bikradda ahayd ee Isisiis u yeedhay hooyadeed oo ku jirta buugta Macbadka Saïs oo yiri: "Midhihii aan dhalay waa Sun." Xilligan (Christmas) -waxaa lagu dabaaldegay oo kaliya riyadii, laakiin waayadii hore ee waagii hore, markii maskaxdul-dabiiciga-Nature-Maya-Mary-ka la sheegay in ay ku dhalatay Qorraxda Xaqnimada, Ilaaha Maalinta, Badbaadiyaha dunida.
Goobta dhalashada waxaa lagu qeexay dad kala duwan. Masriyiintu waxay u hadlaan sida godka ama kaluun, Faarisku waxay sheegeen in ay ahayd ciriiri, Kiristanka ayaa sheeganaya in ay ahayd qafaal. Hase yeeshee, dhammaan fikradaha, si kastaba ha ahaatee, fikradda mid kasta waa la keydiyay, waayo waxay ka timid godadka ama godka muqaddaska ah ee Initiate, Mataanaha Labaad, Dhamaan Shucuurta, wuxuu ku dhashay, waana waajib inuu u baxo dunida si uu ugu wacdiyo iyo inuu wax baro, iyo iftiinka runta ah ee isaga ku jiraa, inuu ku doondoono caloolxumo iyo xanaaq badan, Si loo bogsiiyo kuwa buka iyo kuwa curyaanka ah, iyo inay dadka ka badbaadiyaan gudcurka dhimashada jaahilnimada.
Dhaqdhaqaaqa ganacsiyada, aqoonyahanka, iyo wax-qabadka fiqi ahaaneed ee dunidu waxay ka dhigaysaa iftiin ka mid ah caqiidooyinka qadiimiga ah.
Qorraxdu waxay calaamad u tahay Masiixa, kan dhexe, ruuxa iyo jaahwareerka, oo joogitaanka jirku uu yahay inuu ka badbaadiyo kala dirista iyo dhimashada. Mashuuryadu waa mabaadi'da u muuqda inay muuqdaan muuqaalka jidhka muuqda sida caalamka jidheed, halka jirkani jidhka ama caalamkuna uu sii dhammaan doono Sunta Ruuxu uu sii wadi doono joogitaankiisa. Xaaladaha qorraxda waxay ahaayeen, sidaas darteed, calaamad muujinaysa wakhtiyada iyo xilliyada mabda'a Masiixa ee ugu fiican u muujin karnaa miyirka; iyo xilliga kirismaska ​​mid ka mid ah waqtiyadii muhiimka ahaa markii xuruufta caanka ah lagu sameeyey gudaha Mysteries.
Qofka mowduucaas ka fekeray waxa uu ku guuldaraystaa inuu arko xaqiiqda ah in sheekada dhalashada Ciise, Zoroaster, Buddha, Krishna, Horus, Hercules, ama mid kasta oo ka mid ah Saviors ee aduunka, waa sheekada muuqaalka iyo sharraxa ee safarka qorraxda iyadoo loo marayo laba iyo tobankii calaamadood ee jilibka. Sida ku jirta safarka qorraxda, sidaas daraadeed wuxuu la jiraa Badbaadiye kasta: wuu ku dhashay, silcin, wuxuu ku wacdiyaa injiilka badbaadada, wuxuu kordhiyaa awoodda iyo awoodda, raaxada, bogsashada, curyaaminta iyo iftiiminta adduunka, iskutallaabta lagu qodbo, waa la dhinto waana la aasay , in la cusboonaysiiyo loona soo sara kaco awoodiisa iyo awooda iyo ammaanta. Si aan u diidno xaqiiqadani waa inaan ku dhawaaqno jaahilnimadeena ama inaan isdaba qaadno oo aan isweydiino nafteena.
"Laakiin," waxay ka cabanayaan qowleysatada si qoto-dheer iyo cabsi leh, "waa inaan ku qirayaa inay taasi tahay xaqiiq ah inay iga fogaan doonto rajadayda iyo balanqaadnimadii badbaadinta iyo badbaadada." "Taas waan ku qanacsanahay," ayuu yidhi dadka raacsan ee wax-soo-saarka ah ee ku fashilmay inuu arko oo ah midka uu u arko inuu yahay nin ka soo horjeeda, oo aanu ka fekerin xanuunka uu bixinayo iyo rajada uu ka saarayo rumaystaha, "waa inaad qortaa tan oo aad cambaareynaysaa dhammaan kooxaha iyo diimaha. Oo iyana way ka lumi doonaan, oo waxay u dallici doonaan sida cawska qorraxda horteeda ka hooseeya.
Labadaba, qowmiyadaha iyo waxtarka, waxaan ka jawaabeynaa: Waa mid sharaf leh in la qirto runta inkastoo ay tahay in ay keenaan dhurwaaga iyo sanamyadii aynu ka dhisay naga dhexeeya naga iyo naga in laga saaro oo naga tago, ee adduunka mugdiga ah oo ay ka muuqato dabiicadaha aan la arki karin. Laakiin marxaladda qaar ka mid ah runta waxaa lagu sheegay diinta islaamka iyo kan raacsan ee waxtarka. Mid kastaa, si kastaba ha ahaatee, xag-jirnimo; mid kastaa wuxu u malaynayaa inuu waajibkiisa saaran yahay inuu ku qanciyo ciddii kale ee qaladkiisa iyo inuu beddelo isaga oo aaminsan. Waxaa jira dhul wadajir ah. Haddii mid kastaa naftiisa goortuu yimaado, uu helo waxa qalbigaagu leeyahay, kan kaluu yeelan doonaa.
Masiixiyiintu uma baahna inay ka cabsadaan inuu diido diintiisa haddii uu aqbalo xaqiiqda. Waxyaabaha loo baahan yahay maaha inay baqdin galiyaan in uu lumin doono xaqiiqooyinka haddii uu aqbalo diinta. Wax kasta oo u qalma ilaalinta waa la waayi karaa kan runta raadiya runta. Iyo haddii runta dhabta ah waa shayga raadinta ninkii diinta iyo ninka xaqiiqda ka dibna ka qaadi kara mid kale?
Haddii diinta islaamku aqoonsan doono xaqiiqda adag ee qabow ee maaddada, waxay jannada ku burburin doonaan irbadaha jilicsan ee ku yaalla sanamyadii uu halkaas ku lahaa, oo ka soo horjeeda xiisaha kulul ee walwalka kulul, Jahannamo, dabka ayaa gubanaya cadawga kuwa aan rumaysadka lahayn oo raacaya caqiidooyinka uu rumaystay. Marka laga reebo waxyaabaha aan la ogeyn, wuxuu ogaanayaa in ka dib gubashada sanamyada iyo qashinka, waxaa jirey joogitaan nololeed oo aan lagu sharxi karin qalabka muusikada ama buraashka.
Haddii alaab-hawleedku isku meel galin doono meesha diiniga ah, wuxuu ogaanayaa inuu jiro ilbaxnimo, dab iyo iftiin, taasoo u suura galinaysa inuu qaado masuuliyadaha, inuu guto waajibkiisa, inuu ku dheelo mashiinka dabiiciga ah iyo in la fahmo mabaadii'da uu mashruucani socdo, si uu u gubo nacaybka iyo kibirka uu qabo xaqiiqda qabow ee adag, iyo inuu u beddelo muuqaallada dharka iyo marqaatiyaadka runta ah ee ruuxa nool ee weligiis nool.
Si aad u qirto in nolosha Masiixa ay tahay mid ka mid ah qoraxda qorraxda, macnaheedu maahan in baahida kiristaantu ay tahay samo-yaqaan kaliya, oo ah inuu Masiixa noqdo oo uu noqdo riddada. Sidoo kale diintiisa ama muwaadiniinta diin kasta oo kale ayaa xaq u leh in ay suuq galiyaan badbaadada nafaha, abuuraan kalsooni iyo nidaam diimeed oo diineed oo isku dayaan in ay dib ugu soo celiyaan badbaadada adduunka gaajada ah iyagoo ku qasban in ay iibsadaan alaabtiisa.
Joojiya caqabadaha! Iska ilaali dhammaan awaamiirta xidhaya iftiinka caalamiga ah! Dhulka oo dhan waxay ku nuuxnuuxsadaan iftiinka qorraxda, caruurtana way ka wada qayb geli karaan nuurka. Jinsiyad ama dadku iskama maarmi karaan iftiinkan. Dhammaantood waxay aqoonsadaan in qorraxdu ay isku mid tahay. Laakiin qorraxda waxaa loo arkaa indhaha jidhka oo kaliya. Waxay u kulushaa jidhka jidhka oo nolosheeda u gudbiya dhammaan waxyaabihii maareynta.
Waxaa jira mid kale, Qorraxda aan la arki karin, oo ah qorraxdeena waa calaamad. Qofna ma fiirin karo Qorraxda Qorraxda oo aan la socon. Iftiinkan ayaa miyirka maadiga waxaa loo gudbiyaa miyirka ruuxa. Tani waa Masiixa oo ka badbaadiya jaahilnimada iyo dhimashada, kan ugu horreyn aqbalaya oo ugu dambeyntii helaa nuurka.
Dadku hadda waxay ku filanyihiin sayniska astronomi si ay u ogaadaan in qorraxdu ay xafiisyadeeda u adeegsato maaha allabaryo iyo duco kuwaas oo jinsiyad ama jahwareer jinsi ah ay bixin karaan, laakiin adeecida sharciyada dabiiciga ah. Sida waafaqsan sharcigan dhammaantiis kale ee meel bannaan ayaa si siman u shaqeynaya. Macallimiinta ka soo jeeda wakhtiyada wakhtiga adduunka ayaa ah kuwa kaliya ee adeegayaasha sharcigaan ka sarreeya fahamka maskax ahaan.
Xaqiiqada kaliya ee aan ku dhalanay qoys diinta kiristaanka ah ma na siinayo xuquuqda aan ugu yeerno kiristaanka. Sidoo kale ma haysanno mid kamida ama xuquuq kasta oo gaar ah ama mudnaanta Masiixa. Waxaan xaq u leenahay inaan nafteena ka hadalno sida Masiixiyiin oo keliya marka Ruuxa Masiixa, oo ah mabda'a Masiixa, inaga naga dhex maro fikradaha iyo hadalka iyo ficilka. Waxay u dhawaaqeysaa lafteeda, laguma dhawaaqin. Waan ognahay in aysan ka mid ahayn dareenka, weli waan aragnaa, maqalna waan taabanayaa, waayo waxay ku gaabisaa, soo jiidataa oo sii wadaa wax walba. Waxay u dhowdahay sida ay u fog tahay. Waxay taageertaa oo kor u qaadaysaa, markaan waxaan ku jirnaa qoto dheer oo ay tahay inaan kor u qaadno. Laguma soo sharxi karo laakiin weli waxa ay u muuqataa feker wanaagsan oo wanaagsan. Waa iimaanka kuwa xoogga badan, iyo naxariista kuwa naxariista leh, Iyo aaminnimada kuwa caqliga leh. Waa ruuxa cafisku, wax ku oolka ah dhammaan falalka naxariis darrada, naxariista iyo caddaaladda, iyo dhammaanteedba waa mabda'a caqli-gal ah, mabaadi'da midaysan.
Maaddaama wax walboo caalamku ay si siman u shaqeynayaan iyo sida uu qabo sharciga caadiga ah, sidaa daraadeed noloshu aad u hogaaminayso waxay u muuqdaan kuwo dhammaystiran. Marka aynu luminay aragtida mabaadii'da hoose, waxyaallaha dusha sare u muuqda waxay u egtahay in dhammaan muuqaaladu ay jahawareeraan. Laakiin marka aan ku soo laabano mabda'a waxaan fahamnaa saameynta.
Annagu ma nihin, sida aynu u jeclahay, ku noolnaanta adduunka dhabta ah. Waxaan ku seexannahay adduunka hooska. Waayeelkeenu hadda waa ka dibna waan ku faraxsanahay ama waxaa ku qasbay riyooyin ama riyooyin qaar oo ay sabab u tahay isbedelka hooska. Laakiin naftu had iyo jeer ma seexan karto. Waa in la baraarujiyo dhulka hooska. Mararka qaar wargeeyska ayaa imanaya, oo leh taabasho awood leh, wuxuu nagu dhiiri geliyaa inagoo toosan oo ku lug leh shaqadeena nolosha dhabta ah. Naf-dhiska waa la kicin karaa, oo shaqadiisa u guti karaa, ama lagu riyoodo riyooyinka riyooyinka, waxay ku noqon karaan dhulka hooska, oo ay ku lumiyaan. Waxay ku suntan tahay riyada iyo riyada. Hase yeeshee, riyooyinkeeda ayaa la xusuustaa xasuusta baraarujinta ilaa ay hoos u dhacaan si ay u galaan goobaha ay ku yaalaan, ka dibna, iyada oo xanuunka iyo gariiraya ay bilaabi doonto shaqadeeda. Duty drudgingly sameeyo waa shaqo foosha iyo indhaheeda nafta jadwalka casharada waajibaadka baraya. Duty-ka diyaarka u ah wuxuu u shaqeeyaa jacayl oo wuxuu u muujiyaa riwaayaha runta casharka ee uu keeno.
Qof kasta oo bani-aadam ah waa malaa'ig, oo ah wiilka Qorraxda Qorraxda, Badbaadiyaha dunida oo uu mabda'a Masiixa u iftiimiyo, ilaa uu fahamsan yahay oo uu dareemo miyirka nolosha weligeed ah. Laga soo bilaabo mid ka mid ah oo ka miyir-beelay Miyir-qabka waxaa laga yaabaa inaan helno hadiyaddii Masiixiga ah ee runta ah haddii tani ay tahay waxa aan dooneyno. Jiritaanka Noorweey waa irridda u horseedda nolosha weligeed ah ee nolosha. Maqaalkani wuxuu iman karaa inta aan weli ku jirno hooska. Wuxuu toosi doonaa hurdada riyadiisa iyo awoodiisa si uu uga fogaado hooska hareeraha ku wareegsan. Ogaanshaha hirarka si uu u iftiimiyo ma uusan baqaynin marka ay u muuqdaan in ay ku faani karaan oo ay qariyaan.